Citrine - Ụdị quartz dị iche iche - Njedebe Ferric - Video
Citrine bụ ọtụtụ quartz. Ụdị agba sitere na odo odo na agba ocha. Ọ bụ n'ihi na anaghị adị ọcha. Ngwurugwu ndi ozo adighi adighi. Otutu nkume ahia bu amethysts ma obu kwa smoky quartz enwe ọgwụgwọ ọkụ. Otú ọ dị, amethyst na-ekpo ọkụ na-enwe okpomọkụ ga-enwe obere ahịrị na crystal. Dịka ọdịiche nke ọdịdị ígwé mmiri sitere na citrine ma ọ bụ nke dị mma. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịkọwa ọdịiche dị n'etiti citrine chip na odo topaz. Ma, ha dị iche n'ịdị ike. Brazil bụ onye na-emepụta citrine. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmepụta ya sitere na steeti Rio Grande do Sul. Aha ahụ sitere na Latin okwu citrina. Ọ pụtara odo na ọ bụkwa mmalite nke okwu citron.
A nabatara Citrine mbụ dị ka nkume na-acha odo odo edozi na Gris. N'etiti 300 na 150 BC. N'oge Gris. A na-eji quartz edo edo mee ihe iji mee ka ọla na ọlaọcha chọọ mma. Ma ọ bụghị nke a na-achọsi ike.
Quartz bụ ịnweta. Ihe mejupụtara ya bụ silicon na atom oxygen. Na-aga n'ihu n'ihu SiO4 silicon-oxygen tetrahedra. Ọ bụla oxygen na-ekere òkè n'etiti abụọ tetrahedra. Inye usoro ihe omumu nke SiO2. Ọ bụkwa nke abụọ kachasị mma ịnweta na eriri nri ụwa, n'azụ feldspar.
E nwere ọtụtụ iche iche quartz. Ha bụ nkume dị oké ọnụ ahịa dị oké ọnụ ahịa. Kemgbe ochie, ọtụtụ quartz abụwo ihe a na-ejikarị eme ihe. Na-eme ọla ma na-atụgharị nkume. Karịsịa na Eurasia.
Takeo bụ ógbè Cambodia. N'ịbụ ndị dị n'ebe ndịda ọdịda anyanwụ nke Cambodia, Takeo na-eme ka ógbè Kampot gaa n'ebe ọdịda anyanwụ. Ọ bụkwa ala Kampong Speu n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ. Na Kandal n'ebe ugwu na n'ebe ọwụwa anyanwụ. Ókè ndịda ya bụ ókèala mba ụwa na Vietnam. Isi obodo obodo Doun Kaev. A na-akpọbu Takeo n'oge gara aga. Ọ bụ obodo nta nke nwere 39,186 bi na ya.
Citrine 33.64 CT, si Takeo, Cambodia
zụrụ citrine dị na ụlọ ahịa anyị
Tags hydrothermal, Quartz, sịntetik